Firqada Druzi: Waxaan soo xoreyn doonnaa carruurta iyo haweenka nagala afduubtay - BBC News Somali
Firqada Druzi: Waxaan soo xoreyn doonnaa carruurta iyo haweenka nagala afduubtay
Image caption Druzi waa Firqada saddexaad ee laga gacan-bidxeeyo ee ku nool dalka Suuriya
Druzi waxay kamid yihiin Firqada uu sida wayn u saameeyay dagaalka toddobada sano jirsaday ee ka taagan dalka Suuriya.
Firqadan waxay inta badan ku nool yihiin dhulka ku teedsan buuraha Jabal Al-Druzi ee ku yaalla koonfur galbeed gobolka Suweyda ee dalka Suriya, gobolkan inta badan wuxuu ahaa mid xasiloon, inkastoo ay ka dhacaan weeraro aan badnayn. labo toddobaad ka hor ayay xaaladda ammaan ee deegaannada gebi ahaanba isbeddeleen.
Image caption Fareez Abu Cammaar kuma laaban karo Suuriya sii uu uga qayb gelo aaska hooyadiis
" Ugu dambayntii way soo laaban doonaan dadkeena iyagoo shahiid ah ama nool" sidaas waxaa yiri Fareez Abu Cammar,oo kasoo jeedo gobolka Suweyda.
Firqada Druzi waxay ka tirsan yihiin garabka Shiicada ee Ismaaciliyah tan iyo qarnigii 11-aad.
Image caption Dagaal ka hor, qowmiyadda Druzi waxay tiradoodu ahayd 22.5 milyan
Waxay ka carari jireen inay ku biiran ciidammada
In muddo ah markii ay dagaallada ka bilawdeen dalka Suuriya, Firqada Druzi waxay daacad u ahaayeen madaxweyne Bashaar Al Asad, waxayna ka cabsoonayeen in haddii la afgembiyo dowladda in bulshooyinka la gacan bidxeeyo ay bartilmaamedsan doonan sunniyiinta awoodda ku leh dalkaasi.
Si kastaba, waxay diideen inay qayb ka noqdaan dagaallada Suuriya, sannadkii 2015-kii ayay ahayd markii hoggaamiyeyaasha Firqada Druzi ay shaaca ka qaaday inaysan ka qayb ahayn kooxaha dagaalka ku jiro.
Image caption Ciidammada Suuriya ayaa dhawaan la wareegay deeganno ku yaalo koonfur galbeed dalkaasi
Waxaa lagu khiyaasay 35,000 oo ah dhalinyarada ka tirsan Firqada Druzi inaysan ka qayb qaadanin qorshaha lagu qorayay ciidammo militari, inta badan dhalintani waxay ka carareen dalka Suuriya.
Arrintaasi ayaa ugu wacnaan kartaa inay iska caabin waayeen weerarda Firqadan uga imaanaya kooxda IS.
Wuxuu yiri " Maleeshiyaadka waxay garaacayeen albaabada guryaha,waxayna wateen magacyada dadka guryihaasi iska leh, taasi ayaa dadka gelisay dareen ah cid kasto oo albaabka soo garaacayso ay yihiin kooxda"
Image caption Abu Cammar hooyadis way geeriyootay kaddib markii ay afduubteen kooxda IS
Booliiska Hindiya oo baadigoobaya daanyeer wiil yar dilay
Wuxuu yiri " Carruurta waaliddintooda ay dileen kooxda IS waxay ku noolaadaan nolol naxdin leh"
Image caption In ka badan 200 qof ayaa lagu dilay qaraxo ka dhacay gobolka Suweyda ee Suuriya
Image caption Kooxda IS ayaa inta badan laga saaray goobihii ay gacanta ku hayeen dalalka Suuriya iyo Ciraaq
25-tii bishii July, xubno ka tirsan kooxda IS ayaa dhowr qarax oo ismiidaamin ah ka gaystay tuulooyin dhowr ah oo ku yaalla gobolka Suweyda oo ay ku nool yihiin Firqada Druzi.
Image caption Hoggaamiyaha Firqada Druzi ee ku sugan dalka Lubnaan ayaa ku eedeeyay dowladda Suuriya inay ku guuldaraystay joojinta xasuuqa ka dhan qowmiyadda
Abu Cammaar wuxuu yiri " Haddii aanu nahay Firqada Druzi waxay nagu qaadataba waa in aan is difaacnaa"